लिमिटेड पी पी विद्युत तार रस्सी कर्षण hoist - Buildinglift.com
कठोर अंतहीन यात्रु उचाई (मानव-सवारी) लाई उठाएर डिजाइनरलाई कम गर्न र कम गर्नको लागि असीमित रस्सी लम्बाइको साथ प्रयोग गर्न डिजाइन गरिएको छ। क्षमताहरू99 वा 18 मिनेट / मिनेटमा 500 किलोग्राम देखि 1000 किगोग्राम सम्म सीमित हुन्छ।
कठोर लिमिटेड-पी सीरीज असीमित केबल (तार रस्सी) यात्री लिफ्टिंग होस्ट मार्केटमा उपलब्ध सबैभन्दा नराम्रो विकल्प हो जुन ट्रेक्टेल तीर XP सीरीज होस्टिस्टमा रहेको छ। नयाँ कठोर लिमिटेड-पी सीरीज अनगिनत उचाइ बहुमुखी र असीमित अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त छ।
रस्सी जोडिएको छैन जुन यसलाई कम्पैम्प, हल्का हल्का र धेरै सजिलो बनाइन्छ। अप्रत्यक्ष तार रस्सी लामो कठोर लिमिटेड-पी सीरीजको क्षमताले असीमित लिफ्टिंग हाइट्स र कर्षण लम्बाइको प्रयोग गर्न सम्भव बनाउँछ।
1. मृत-कास्ट एल्युमिनियमको बलियो, सटीक मशीला आवास, कम मृत वजन र उत्कृष्ट कठोरता सुनिश्चित गर्दछ।
2. गियरिंग र डाइभाइ चलाउन कठोर इस्पातबाट बनाइएको छ।
3. winches को विश्वव्यापी अनुलग्नक एक मध्य 16mm भार पिन, वा दुई M10 शिकंजा को माध्यम ले सक्षम छ।
4 मोटर संरक्षण: IP55 लाई मानकको रूपमा सुरक्षित।
5. मानक लिमिटेड-पी सीरीज ओपरेटिंग भोल्टेज: 380V, 3ph, 50 हर्ट्ज (भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सी अनुरोधमा उपलब्ध छ)।
6. भोल्टेज नियन्त्रण गर्नुहोस्: स्थिर अनुप्रयोगको मोडेलका लागि मोबाइल अनुप्रयोग इकाइहरु र 42V को लागि 24V।
7. चरण निगरानी: मोबाइल अनुप्रयोग मोडलमा मानकको रूपमा, स्थिर एकाइहरूमा उपलब्ध छैन।
8. हावा मोटर, मानक थर्मल अधिभार संरक्षण उपकरण संग फिट हुन्छ।
9। प्रमाणीकरण: प्रमाणित र स्वतन्त्र निरीक्षण संस्थान (TUV) द्वारा प्रमाणित।
10. ड्राइभ शीभ र विशेष निद्रित भयो इस्पात को दबाव रोलर्स लगभग 70 HRC को सतह कठोरता संग, यिनी घटकों को कम पहन को गारंटी।
11. पूर्ण-कृत्रिम विशेष तेलले शान्त चलिरहेको गुणहरूको लागि उच्चतम सम्भावनालाई सुनिश्चित गर्दछ, तापमान -40 डिग्री सेल्सियस सम्म 70 डिग्री सेल्सियस।
12. मानककृत घटकले सबै पहिएदार भागहरूमा सजिलो पहुँच सुनिश्चित गर्दछ।
LTD-P सीरीजको मुख्य मापदण्डहरू
(एम / मिनेट) नामांकन रस्सी व्यास
* भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सी अनुरोधमा उपलब्ध छ।
यात्री ऊंचाई को लागि सुरक्षा DIN EN1808 को आवश्यकताहरु अनुसार, यात्री ऊंचाई को लागी उपयोग को लागी प्रत्येक लिपि को एक सुरक्षित सुरक्षा रस्सी मा सुरक्षा प्रणाली को सुविधा चाहिए। कठोर प्रस्ताव दुई फरक सुरक्षा दुई साधारण अनुप्रयोगहरूको लागी पतन बन्धक। दुवै प्रकार यात्री उचाइको लागि स्वीकृत गरिएको छ र मानक DIN EN 1808 "निलम्बित पहुँच उपकरणहरूमा सुरक्षा आवश्यकताहरू" लाई अनुपालन गर्दछ। यसबाहेक, आन्तरिक निरीक्षण संस्थान (TUV) द्वारा प्रमाणित गिरफ्तारी प्रमाणित गरिएको छ।
लचीला संलग्न अंकहरू
आवासको कोनेहरूमा संलग्न संलग्न प्वाइन्टहरू पेंच वा पिनहरूसँग लचीलो संलग्नकका लागि उपलब्ध छन्।
सुरक्षा तल्लो तंत्र
पावर विफलताको घटनामा, विद्युतीय मेकेनिकल ब्रेक मैन्युअल रूपले लोड गर्न सुरक्षित र नियन्त्रण कम गर्न सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
आन्तरिक तंत्र ओवरलोड
जब लोभमा अभिनय गर्दा भार बढ्छ वा लोड सीमाभन्दा बढी हुन्छ, तोडले बढ्ने रोकिन्छ वा मात्र उत्राउँछ।
सञ्चालन घन्टा र सुरूको सङ्ख्या रेकर्ड गर्नुहोस्।
• अन्य सञ्चालन भल्टेज।
• धेरै होस्टहरूको लागि डबल नियन्त्रण।
• रेडियो रिमोट कंट्रोल।
• माथिल्लो यात्राको लागि स्विच सीमा।
• सञ्चालन घन्टा र सुरूको संख्याको लागि काउन्टर।
• पतन अन्डेस्टर (अधिक गति वा विरोधी टाइलिंग, यात्री उचाई अनुप्रयोगका लागि आवश्यक)।
• पछाडी फिटिंगको लागि एडाप्टर।
• अनगिन्ती हाईस र ड्रिल अन्डेस्टरको लागि रोपहरू।
• ओवरलोड कट-आउट (यात्री उचाई winches को लागि आपूर्तिको दायरामा समावेश छ)।
ओभरस्प्रेड सुरक्षा घटाउने सेन्टर (ओएसएल)
ओभरपाइड गिर गिरफ्तारी स्वचालित रूपमा ट्रिप गरिएको छ जब केबलको कम गति 30 मिनेट / मिनेट (0.5 एम / एस) भन्दा बढी छ।
कडा स्टीलले बनाएको एकीकृत क्लाइम्पिंग जबरन तंत्र केही सेन्टिमिटर भित्र तार रस्सीको कम हुँदैछ।
एंटी-टिल्टिंग सुरक्षा गिरने सेन्डर (एलएफएस)
एंटी-टेल्टिंग ड्रिस्ट एण्डेस्टर स्वतः स्वचालित हुन्छ जब रस्सी वा प्लेटफर्म को कोण5डिग्री भन्दा बढी छ।
एकीकृत क्लम्पिंग जबरन तंत्रले रस्सी राख्छ र तुरुन्तै प्रणालीको गति रोक्छ।
मोडेल संख्या: लि-पी
उपयोग: मानव सवारी
अधिकतम लिफ्टिंग: ग्राहकको अनुरोध
लिफ्ट गति:9/ 18m / मिनेट
प्रमाणीकरण: CE TUV
उत्पादन को नाम: वायर रस्सी कर्षण hoist
भोल्टेज: 380V (415V / 220V)
Dia। को तार रस्सी: 8.3mm /9.1mm / 10.2 मिमी